I-Roses kunye nokunyamekela kwabaqalayo-ulwazi lokulima
Ixesha lokutyala likwindla
I-Rose yinquma emva kwexesha lokuqhwala
Ukulawulwa kwezilwanyana ezinobungozi kunye neendidi ezinemibala ehlukahlukeneyo
Kukho izityalo ezimbalwa ezitholakala kwiintlobo ezahlukeneyo ezinjenge-"ukumkanikazi weentyantyambo", i rose. Iintlobo eziqhelekileyo zeeresi zegadi zasemakhaya zininzi eziphantsi okanye ezincinci izihlahla ezikhulayo ukuya phezulu.
U-Rose unakekele abaqalayo - kulula ukuba unakekelwa yi-roses
Apha, ulwahlulo lwenziwe phakathi kweentlobo ngeercemes okanye kwi-inflorescences zalabo abenza ientyatyambo enye kwi-shot nganye. Yiyiphi indlela ekhethekileyo kunye nombala owukhethayo ngokukodwa ngumcimbi wongcamango.
I Roses kwigadi yase-rose
Kubaluleke kakhulu, ezininzi zezi ntyatyambo zikhetha indawo enelanga. Oku kusebenza nakwimitha yokunyuka, apho unokuyihobisa udonga lwendlu okanye i-trellis kakuhle.
Iphutha malunga nokunyamekela kwama-rose
Ngokuchasene noluvo olusasazekayo lokuba ama-roses anonyango olunzulu, kulula kakhulu ukunyamekela. Oku kuyinyaniso kubanini bezityalo abanqwenela ukunandipha iintyatyambo ezintle kunye nokukhula okuluhlaza. Kubalimi, ngokuqinisekileyo, kukhangeleka.
Ukuba ufuna ukuba nomsebenzi omncinci kangangoko kunokwenzeka nge "ukumkanikazi weentyantyambo", khetha iindidi ezinobusika kwiintsimi zakho. Iindiza ezimnandi ezibomvu zidla ngokuqhwala kwiqabunga, okuyiyona nto iyinyaniso kwiintlobo zeNgesi.
Ixesha elifanelekileyo lokutshala i roses ngwindla. Ukuba ufuna ukuzonwabisa ngeentyatyambo zakho ixesha elide, kufuneka uzinike kwi-nursery ekhethiweyo, mhlawumbi ngaphandle kwembiza. Ngaphambi kokuba uzibeke emhlabathini, umhlaba kufuneka ulungiswe kakuhle.
Kubaluleke kakhulu ukukhulula isizathu esilungeleyo kuba iirasi zenza izimpande ezinde. Le meko iya kunceda omnye kamva, kuba akudingeki ukuba manzi izityalo rhoqo kwiindawo ezinomileyo.
Ufanele uqule ii roses ekuwa hayi, Oko kwakha amahlumela amancinci angabhalela ebusika kwaye akhuthaze umonakalo weqabunga kwisityalo.
Emva kokutyala kuwanele ukumbamba umhlaba umancinci kunye namanzi kakuhle. Ebusika nje ngekona, iirase ezibusika zimele zikhuselwe kwiqhwa eliqinileyo. Nakhu, ke ke, kunelungelo lokumboza umhlaba malunga nesiqu kunye ne-bark mulch okanye ama-fir amagatsha, malunga nobubanzi beentimitha ezilishumi.
Kuxutywa kuphela entwasahlobo. Imveliso ye-Organic iyakulungeleka ukuba ifakwe kumhlaba ojikeleze isityalo
Ngaphambili, iirase zidinga ukusikwa kwonyaka, kodwa kuphela xa kubusika ekugqibeleni. Kubalulekile ukususa onke amahlumela omisiwe kunye namaplanga.
Ukongezelela, isicatshulwa ngasinye kufuneka sifutshane ukwenzela ukuba ukusuka emhlabathini kuphela "amehlo" amabini, oko kukuthi ukunyuka kwamasebe amatsha kukhula, kubonakala.
Kuye ngaphandle kokuthetha ukuba iinqwelo zokukhawulela ezifanelekileyo nezifanelekileyo ziyimfuneko ukufezekisa izinto ezinokuthi zenzeke. Ngaphandle koko iifungi kunye nezinye iintlekele zifumaneka apha.
Ehlotyeni unokuzonwabisa ngokukhawuleka okungenamkhawulo. Ukuba kuyimfuneko, ungaphinda uhlume kuze kube nguJuni kwaye mhlawumbi uphulule ngexesha elide, kodwa nceda ungafaki kumva kwemini kwaye uvela phezulu!
Amaconsi amanzi kwiintyatyambo kunye namaqabunga ekukhanyeni kwelanga angakhokelela kumatshini okutshisa okutshitshiswayo kwisityalo.
Kwaye abo bayesaba iintlobo zezilwanyana zitshala nje i-lavender kwiindawo ezikufutshane: ayithengisi kuphela i-aphids kunye nephunga layo, kodwa ibeka i-accents yaseMedithera.
Ngaba ulahlekelwa ulwazi, ngaba ufuna isihloko esithile? Thetha nathi.
Iingcamango zeJadi - Ukufakela nge roses
Imibala yeentaka kunye nee roses
Umbala wekhasi elidala lomdaka we-roses
Yimiyezo - izityalo kunye nokuzonwabisa
Imibono Yemiyezo - Igadi Ehle